Global Voices teny Malagasy · 19 Janoary 2018
19 Janoary 2018
Tantara tamin'ny 19 Janoary 2018
Manahy Ireo Ogandey Fa Ho ‘Hihitsoka’ Miaraka Amin'ny Filoha Museveni Izy Ireo Rehefa Nofoanana Ny Volavolan-dalàna Momba Ny Fetran-Taona
"32 taona tao anatin'ny tsy fahombiazana ary ankehitriny isika dia mbola mihitsoka miaraka amin'ity olona tsy mahomby sy tia tena ary manana governemanta kiantranoantrano ity!"
Mitady Mangarahara Ara-politika i Shily
Nanapa-kevitra hampiato ny firaisan'ny antokony amin'ny PPD i Fernando Flores (ES), Senatera avy amin'ny fiaraha-mitantana ankavia, noho ny resaka kolikoly miaraka amin'ireo senatera hafa avy ao amin'ny fiaraha-mitantana ihany.
Nepal19 Janoary 2018
Lohahevitra resahana manerantany ny fitsitsiana angovo sy ny fitadiavana loharanon'angovo tsy manimba ny tontolo iainana. Ho an'ny firenena mandroso sy ny an-dalampandrosoana, iray amin'ireo olana manan-danja ny angovo. Resahana ankehitriny any Washington ka hatrany Riyadh ny tahotry ny tsy fahampian'ny angovo amin'ny hoavy.